Ny Hebei Lihua Pharmaceutical Co., Ltd. dia mandray tsara ireo mpanjifa Rwanda hitsidika
Hebei Lihua pharmaceutika dia mamaly mavitrika ny politika nasionaly "Belt and Road" ary manitatra fatratra ny tsena afrikanina ampitan-dranomasina. Ny marainan'ny 22 aprily, tonga tao amin'ny orinasanay ny kabahizi mpanjifa Rwanda mba hitsidika sy hiady hevitra momba ny fiaraha-miasa. Ny tale jeneralin'ny ...
Fandaharam-pikarohana momba ny fisorohana sy fanaraha-maso ny kisoa afrikanina, Akademia sinoa momba ny siansa momba ny fambolena (2018-2022)
2019 Nian 5 Yue 24- Ri, fampahalalana momba ny fivoaran'ny fikarohana nataon'ny Akademia Sinoa momba ny fambolena dia nanambara ny "programa fikarohana momba ny fisorohana ny fihenan'ny kisoa sy ny fanaraha-maso ny afrikana". Taorian'ny fisian'ny valanaretina tazo afrikana, ny Akademia sinoa momba ny siansa fambolena t ...
Niverina niaraka tamin'ny enta-mavesatra tanteraka ny tsenambarotra fampiroboroboana sy fanondranana entana any Sina faha-125, Hebei Lihua Pharmaceutical Industry Co., Ltd.
avy amin'ny admin tamin'ny 19-05-07
2019 Nian 5 Yue 1 andro -5 th, 125 th China Import sy Export Fair natao tao amin'ny Guangzhou Pazhou Exhibition Center. Amin'ny maha hetsika varotra iraisam-pirenena azy, ny faritra fanondranana ity fampirantiana ity dia misy lamba sy fitafiana, valizy, kolontsaina sy fanatanjahantena, sakafo, kojakoja ara-pahasalamana ary medi ...